October 2012 ~ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ရေပေါ် အရုပ်ရေးသလိုဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု
Wednesday, October 31, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
“အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ကျွတ်အောင် မချွတ်နို်င်သေးဘဲ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးရေးကို ကြိုးပမ်းနေမှုတွေဟာ ရေပေါ် အရုပ်ရေးသလို အချည်းနှီး ဆောင်ရွက်မှုတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။”
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် လိုလားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကနေ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအထိ တက်လှမ်းလိုတယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်တွေ ကြိုးကိုင်ထားဆဲ မြန်မာစစ်တပ်ကို အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ်တရပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက် အရောက်ပို့နိုင်ရေး ပြည်သူနဲ့အတူ အရင်ကြိုးပမ်းကြဖို့ လိုပါတယ်။ အလုံးစုံသော အာဏာပါ၀ါရှိတဲ့ အရပ်သားအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့မှသာ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မြန်မာစစ်တပ်က အာဏာရှင်တစုရဲ့ ကြိုးကိုင်မှုအောက်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ရုပ်သေးသမ္မတက စစ်တပ်အပေါ် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးနေလို့ကတော့ အပစ်ရပ်ထားရင်လည်း ရပ်ထားတာပဲရှိမယ်။ စစ်မှန်တဲ့ နို်င်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုရဲ့ အချိန်ဆွဲ မက်လုံးပေး ဖြိုခွဲမှု နည်းဗျူဟာအောက်မှာ အခန့်မသင့်ရင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရှိရင်းစွဲ ညီညွတ်မှုတွေ ပြိုကွဲသွားနိုင်သလို ညီညွတ်ရေး မပြိုကွဲရင်လည်း သာရင်သာသလို၊ အကျိုးစီးပွားပေါ်လာရင်ပေါ်လာသလို ကတိကဝတ် ချိုးဖောက်တတ်မြဲဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ ကြိုးကိုင်ထားဆဲ စစ်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ ဝေလာဝေးလို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ …
ပထမအချက်က … ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုဘက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်တဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေက ဖီလာဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကနေ စစ်မှန်တဲ့ နို်င်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအထိ တက်လှမ်းပြီး ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒ ပြင်ဆင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပြီး ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်စေပြီး ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒအောက်ကို ဒူးထောက်အညံ့ခံစေရေးနဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အာဏာရှင်တွေ ကြိုးကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အောက်ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်လို ပုံစံတမျိုးမျိုးနဲဲ့ သွတ်သွင်းပြီး ဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်သစ်ကို ထူထောင်ရေးဖြစ်နေတာကြောင့် ရည်မှန်းချက်ချင်း ဖီလာဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က … ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုယူနိုင်သယောင်ယောင် သတင်းကြီးနေတဲ့ ဦးအောင်မင်းဟာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာရှိသူ မဟုတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွွံ့ရုပ်သေးအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကို အဓိက ဦးဆောင်တဲ့ ဦးအောင်မင်းဟာ ကြံ့ဖွံံ့စစ်အုပ်စုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အာဏာရရှိထားသူ မဟုတ်ဘဲ ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုရဲ့ ကြိုးဆွဲသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လူယုံ (ပွဲစား) အဆင့်လောက်သာရှိလို့ သူ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ လိုလားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်အထိ မရောက်နိုင်မှာ လုံးဝသေချာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရနောက်ကွယ်က စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ချောင်ထိုးမှုကို ဦးအောင်သောင်း ခံခဲ့ရသလို ကချင်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ထူးခြားမလာရင် (လွယ်လွယ်နဲ့လည်း ထူးခြားဖို့မရှိ) ဦးအောင်မင်းလည်း အချိန်မရွေး ချောင်ထိုးခံရနိုင်တာပါပဲ။ အဲသလို ချောင်ထိုးခံရရင် မူဝါဒ တိတိကျကျမရှိတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ရလဒ်တွေ တမဟုတ်ချင်း ရေစုန်မျောပြီး မြောင်းထဲရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ အလွန်ဆုံး ကြိုးပမ်းပေးနိုင်မှာနဲ့ ကြိုးပမ်းခွင့်ရှိမှာက ယာယီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရရှိရုံလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ အကြေအလည် ဆွေးနွေးဖို့ကို နောက်ကွယ်က ဆရာကြီးတွေက အမှန်တကယ် ဆန္ဒမရှိတာကြောင့် အဲဒီကိစ္စအတွက် ဦးအောင်မင်း ဘာမှ တတ်နိုင်မှာမဟုတ်တာ အသေအချာပါ။
ဦးအောင်မင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကာချုပ််မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါခဲ့ရင်တောင် အမှန်တကယ် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင် မပေးနိုင်ဆိုတာ မသေချာမရေရာတဲ့ကိစ္စပါ။ ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုဘက်မှာက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျရေရာတဲ့ မူဝါဒမရှိဘဲ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေက အခြေအနေအရ မီးစင်ကြည့်ကတဲ့ မူဝါဒကို ကျင့်သုံးနေလို့ပါ။ လတ်တလောအနေအထားမှာ နောက်ကွယ်က ဆရာကြီးတွေ မျှော်လင့်ထားပုံက အပစ်အခတ်ရပ်ထားနိုင်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒအောက် ၀င်ရောက်ရေး မစည်းရုံးနိုင်သေးရင်တောင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်တာလောက်ကို ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရပြီလို့ နိုင်ငံတကာကို ပြပြီး အမြတ်ထုတ် လုပ်စားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အဲသလို ပြစားပြီး အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကချင်ကိစ္စက သူတို့အတွက် ဖင်ကြားခဲခုဖြစ်နေတာပါ။
စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆီ တက်လှမ်းရေးမှာ အဲဒီလိုအနေအထားတွေ ဖြစ်တည်နေတာကြောင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ ယာယီအပစ်အခတ်ရပ်စဲထားရုံ ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ် အနေအထားလောက်မှာ ငုတ်တုတ်မေ့နေရတာထက်စာရင် စစ်အာဏာရှင်တွေကို ပြိုင်တူဖိအားပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းတာက စစ်မှန်တဲ့ နို်င်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆီ ရောက်ရှိဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်တူဖိအားပေးဖို့ မကြိုးစားဘဲ အာဖရိက မြင်းကျားတွေလို တကောင် အဆွဲခံရချိန်မှာ ကျန်တဲ့အကောင်တွေ မြက်စားမပျက်သလိုမျိုး ပြုမူကျင့်ကြံနေရင်တော့ ကြာလာတာနဲ့အမျှ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အစွယ်သစ်က အင်အားစုတစုချင်းစီရဲ့ ဂုတ်ပိုးပေါ် လာခဲတာကို အလှည့်ကျ ပြန်ခံရဦးမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသို့ လေးစားစွာဖြင့် …
နံနက် ၁း၁၅ နာရီ
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၌လည်း အဓိကတာဝန်ရှိဟု UNA ပြော
ရဲမွန် – ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရာ၌ တပ်မတော် အကြီးအကဲများသည်လည်း အဓိက တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်သွားရန် လိုကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) က အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“သမ္မတကြီး ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည် တိုင်းပြည်၏ စစ်မှန်သော ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲများ အပါအဝင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အမြန်ဆုံး ရပ်စဲရန်နှင့် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်” ဟု အဖွဲ့ဝင် ၅ ဖွဲ့ ပါဝင်သည့် UNA ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော် သမတ ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အနေနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပြည့်အဝ မအောင်မြင်ခြင်း၏ အကြောင်းမှာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “အခုသမ္မတကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ လုပ်လိုက် သေနတ်သံတွေ ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတယ်၊ တကယ်လို့ တပ်မတော်ကလည်း ပါလာမယ် ဆိုရင် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ပိုပြီးတော့ ခိုင်မြဲလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် တပ်မတော်ကနေ တတပ်တအား ပါဝင်ဖို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းလိုတယ်” ဟု UNA အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ စိုင်းလိတ် က ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြား အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များအပေါ် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အပြည့်အဝ ရှိရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်းကို UNA က အကြံပြုထားသည်။
စိုင်းလိတ်က “ဘယ်တပ် အဖွဲ့အစည်းမဆို ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ကြတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွက် အာမခံချက် ပေးနိုင်မယ့် နိုင်ငံရေး ပလက်ဖောင်းတခု၊ နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းတခုကို ဖန်တီးပေးပြီး၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းမှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ရှုမြင်တယ်” ဟု ဆက်ပြောသည်။
ထိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများသို့ အီးမေးလ်မှတဆင့် ပို့ထားသည်ဟု သိရသည်။
၎င်းပြင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ပြဿနာသည် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ၏ မပြည့်စုံချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပြီး ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှတဆင့် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် ညီလာခံတရပ် ကျင်းပသင့်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“တိုင်းရင်းသားတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် တောင်းဆိုလာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ တန်းတူညီမျှခွင့်နဲ့ သူတို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ဆိုတဲ့ အချက်တွေ အားလုံးဟာ အဓိက အရင်းအမြစ်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေရဲ့ ပုံစံ မကျမှုကြောင့်ပဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသာလျှင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက် တိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒကို အာမခံ ပေးနိုင်တယ်၊ ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ် ဆိုရင် ဒီတိုင်းရင်းသား ပြဿနာဟာ အလိုလို ပြေလည်သွားမှာပဲ” ဟု စိုင်းလိတ်က ပြောသည်။
၎င်းပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရာတွင် သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၊ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ အားလုံး အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ရန်နှင့် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်လည်း UNA က တောင်းဆိုထားသည်။
UNA မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၁ ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရှမ်းပြည် ကိုးကန့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၅ ဖွဲ့သာ ကျန်ရှိပြီး လေ့လာဆဲ မဟာမိတ်ပါတီ ၃ ခု ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အစိုးရသည် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် အတိုင်း လိုက် နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ကရင်နီ အခြေပြု လူမှုအသင်းအဖွဲ့များ ကွန်ရက်(KCSN) အဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် “မြန်မာ အစိုးရနှင့် KNPPတပ်ဖွဲ့တို့ အကြား ၆ လတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်း အပေါ် သုံးသပ်ချက်” အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ KCSN အဖွဲ့က ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က အစိုးရနှင့် KNPP အဖွဲ့တို့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် သဘောတူညီမှု ရရှိထား သည့် ၁၄ ချက် အထဲမှ တချို့အချက်ကို ပျက်ကွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ အနေနှင့် နှစ်ဖက်တပ်များ သွားလာရာတွင် ကြိုတင် အသိပေးခြင်း၊ စစ်လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ KNPP တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရွာသစ် ရေကာတာ စီမံကိန်းကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုခြင်း စသည်တို့ကို သဘောတူခဲ့ကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ကွာခြားချက်များ၊ တားဆီးမှုများ ရှိကြောင်း KCSN အဖွဲ့မှ ခူးတော်ရယ် က ပြောသည်။
“သဘောတူညီချက်ထဲမှာက ဒီစီမံကိန်းတွေကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း လူသိ သူသိအောင်၊ လေ့လာလို့ရအောင် အဲဒီလိုခွင့်ပြုတယ်၊ ဆိုတော့ သဘောတူညီချက်က စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်၊ လက်တွေ့ သွားတဲ့အခါ မရဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် တည်ဆောက်မည့် ယင်း ရွာသစ် ရေကာတာ စီမံကိန်းတည်ရှိရာ ဒေသသို့ KNPP နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများထံ ခွင့်တောင်း၍သွားသော်လည်း လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသည့် နယ်မြေခံ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း ခူးတော်ရယ်က ဆက်ပြောသည်။
“သွားခွင့်မရတာကတော့ သူတို့ နယ်မြေခံ စစ်တပ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့ကို လာတွေ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကတော့ စကား ချိုချိုသာသာပဲ ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် သွားခွင့်ရမယ် မရဘူး အထက်ကို တင်ပြမယ် လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် သွားလို့ မရတာ အထက်နဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ နားလည်တယ်”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ရှမ်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုစိုင်းစိုင်းကလည်း“အကယ်၍ လူထု အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ သွား ကြည့်မယ် ဆိုရင် ကျနော့်အနေနဲ့ သေချာတာကတော့ တရုတ်က လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ အားလုံး လုပ်ထုံလုပ်နည်း အရ မလိုက်နာဘူး၊ အဲဒါကြောင့် မပေးဝင်ချင်တာ ပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
ရွာသစ် ရေကာတာ စီမံကိန်းသည် ဘော်လခဲမြို့နယ် အနီး သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ဒါးတန်း ကော်ပိုရေးရှင်း (Datang Corporation)နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ ပူးပေါင်း၍ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါ၀ပ် ၆၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒါးတန်း ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ Global Compact ခေါ် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးက သဘောတူလက်ခံထား သည့် လူ့အခွင့် အရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်အားစံနှုန်းများ စသည့် မူဝါဒများကို လက်ခံလိုက်နာမည်ဟု လက်မှတ်ရေး ထိုး၍ အဖွဲ့ ၀င်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများက ဆိုသည်။
သဘောတူချက်တွင် ပါ၀င်သည့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားလာရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုတင် သတင်းပေးခြင်း မရှိသည့်အတွက် KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်း KCSN အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရနှင့် KNPP အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရရှိထားသော်လည်း လူထူအကြား ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေ အနေမှန်များကို သိရှိရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး KCSN က ယင်း အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KCSN အဖွဲ့ အနေနှင့် သဘောတူညီချက်များ အတိုင်း ထိန်းသိမ်းလိုက်နာရန် အစိုးရကို တောင်းဆိုထားသည်။
KNPPမှ အတွင်းရေးမှူး (၁) ခူးဦးရယ်ကလည်း အစိုးရအနေနှင့် သဘောတူညီချက် တချို့ကို ပျက်ကွက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး အစိုးရနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံသည့်အခါ ၎င်းကိစ္စများကို အခြေခံ၍ ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောသည်။
“သူတို့ဘက်က တာဝန်ခံမှုတွေ မရှိဘူး၊ ဥပမာ ရွာသစ် စီမံကိန်းလိုမျိုး၊ နောက် စစ်လေ့ကျင့်ရေး စီမံကိန်းလိုမျိုး၊ နောက်ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စတွေမှာလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်၊ တနစ်တကျ ပြင်ဆင်မယ်၊ နောက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ကိစ္စတွေမှာလည်း သူတို့ဘက်က လျော့ရဲရဲပဲလို့ ကျနော်တို့ဘက်က အဲဒီလိုပဲ မြင်တယ်”ဟု ခူးဦးရယ်က ဆက်ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် KNPP တပ်ဖွဲ့တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး နှစ်ဘက် သဘောတူ စာချုပ်ကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ရ ရက်နေ့ကပြည်နယ်အဆင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ထပ်မံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
KNPP တပ်ဖွဲ့အနေနှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် တောင်းဆိုထားသည့် အချက် ၂၀ မှ ၁၄ ချက်သာ သဘောတူညီ၍ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
ကျန်နေသော အချက် ၆ ချက်မှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော် မတီနှင့် ထပ်မံ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အစုိးရ ခ်ဳိးေဖာက္ဟု ကရင္နီလူမႈအဖြဲ႔ ေျပာ click
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအား ကရင္နီလူမႈကြန္ရက္မွ သတိေပး click
- KNPP ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ KCSN ကြန္ရက္က ေဝဖန္ click
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားေပ်ာ့ဟု KCSN အဖဲြ႔ ေထာက္ျပ click
- အစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္ click
- KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအေပၚ KCSN ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ click
Tuesday, October 30, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့၏ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ ကျင်းချန်းဟိုတယ်တွင် ယနေ့ ကျင်းပရာ သဘောတူညီချက် တစုံတရာ မထုတ်ပြန်နိုင်ဘဲ ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောဆိုကြသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမး်ရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရာတွင် စစ်ရေးနည်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်မှ ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မည်ကို နှစ်ဘက်စလုံးမှ အလွတ်သဘော ပြောဆိုကြသော်လည်း စစ်ရေးအရ မည်သို့ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲမည်ကိုမူ နှစ်ဘက်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များ မတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ မသိရပေ။
“အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးအရ မပြေလည်ရင် စစ်ဆိုတာ ထပ်ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် စစ်ရေး နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ ထပ်တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က ပြောသည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်များ မရှိသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းကလည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာရန် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) နှင့် တွေ့ဆုံကာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာဖို့ ကတိပေးတယ်။ KIO နဲ့ နောက်တကြိမ် ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပြည်တွင်းမှာပဲ တွေ့ချင်တယ်။ ဗန်းမော် သို့မဟုတ် မူဆယ်ကို KIO က ရွေးပေးပါ။ နောက်ထပ်လည်း တွေ့ချင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဆိုအရ ယခု အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး ဆွေးနွေးရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များသာမက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်များ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးတန်း စစ်ဦးစီးမှူးများပါ တက်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲရေးအတွက် စစ်ဘက် အကြီးတန်း ကိုယ်စားလှယ်များ နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံရန်လိုကြောင်း၊ သို့သော် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ KIO ဒုတိယစစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွန်မော် မတက်ရောက်မည့် အကြောင်းပြန်မှုကို နောက်ဆုံးအချိန်မှ သိရ၍ မြန်မာအစိုးရဘက်မှ အဆင့်တူ ဆွေးနွေးမည့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးှဌာန အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်မှ စတင်ပြီး တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂွန်မော် မလာရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIO က ပြောသည်။
KIO က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် အဓိက တောင်းဆိုနေပြီး မြန်မာ အစိုးရဘက်ကမူ မြစ်ကြီးနား-ပူတာအိုလမ်းကို လုံခြုံငြိမ်းချမ်းသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် KIO က ကူညီရန်၊ တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန်၊ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ စစ်ဘေးကြောင့် နေရပ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူများကို ၂ ဖက် ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ၂ ဦး ၂ ဖက် စစ်ရေး အရှိန်လျှော့ချရန် တောင်းဆိုသည်။
KIO နှင့် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) သည် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နောက်ဆုံး ကျန်ရှိသော လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းနှင့် သုံးကြိမ်တိုင် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံမှုမှာ ယခုအကြိမ် ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်နှင့် KIA တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်သူ သောင်းချီ၍ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်သည်။
ယခု တွေ့ဆုံမှုသည် ပထမ ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုသာ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KIO က ဆိုသည်။
မရေမရာ ဖြစ်သွားသော KIO နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖေါ်ဆောင်ရေး ကော်မီတီ ဒုက္ကဌ ဦးအောင်မင်း၏ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ထိရောက်မှု မရှိကြောင်း၊ ယနေ့ ကျင်းပသော တရုပ်ပြည် ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲကို လေ့လာနေသည့် ကချင် ခေါင်းဆောင် တဦးက ဆိုပါသည်။
“ ဒီလိုဗျ။ အစိုးရက အပစ်ရပ်ရေး ကိုဘဲ လိုချင်နေတာကို ကချင်က သိတယ်ဗျ။ ကချင်ကတော့ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာချင်နေတယ် ဒီတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ အတွက်။ အခု အစိုးရက လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလို တခြား တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ အပစ်ရပ် ထားပြီးတော့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ် နေတာကို ကချင်ဖက်က မလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံးက ခြေမြင်နေကြတော့ အစိုးရဖက်က ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်မပါလို့ ဆိုပြီး စစ်ရေး ကိစ္စကို အကြောင်းပြ နေတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် အခု ဆွေးနွေးပွဲက မထိရောက် တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲသည် တရားဝင် ဆွေးနွေးပွဲမှ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်သွား ပါသည်။ KIO သည် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အဓိက တောင်းဆိုနေပြီး အစိုးရ ဘက်ကမူ မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းကို လုံခြုံရေး၊ တာပိန် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန်၊ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ စစ်ဘေးကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရသူများကို ၂ ဖက် ပူးပေါင်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စစ်ရေး အရှိန် လျှော့ချရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါသည်။
“အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးအရ မပြေလည်ရင် စစ်ဆိုတာ ထပ်ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် စစ်ရေး နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေ ရှင်းတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ ထပ်မံ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ကချင် လွတ် မြောက်ရေး အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က ဆွေးနွေးပွဲ၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သော အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များမှာ-
၁။ ဦးအောင်မင်း (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၊ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန)
၂။ ဦးဝင်းထွန်း (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန)
၃။ ဦးအုန်းမြင့် (ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၊ မွေး/ရေ ၀န်ကြီးဌာန)
၄။ ဦးစဝ်အောင်မြတ် (ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်)
၅။ ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း (ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်)
၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းနောင် (မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး)
ရ။ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုး (အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး)
၈။ ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယ-ရှေ့နေချုပ်)
၉။ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်ဝင်း (ဒု-၀န်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန)
၁၀။ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင် (ကချင်ပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး)
၁၁။ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သူ (ရှမ်းပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး)
၁၂။ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုးဝင်း (ကာချုပ်ဦးစီးရုံး) တို့ဖြစ်ပါသည်။
KIO ဖက်မှ တက်ရောက်ကြမည့် ဗဟို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ဝင်များမှာ-
၁. ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)
၂. ဦးလဖိုင်လ (အဖွဲ့ဝင်)
၃. ဦးဇော်ရော် (အဖွဲ့ဝင်)
၄. ဦးခွန်နောင် (အဖွဲ့ဝင်)
၅. ဦးဂျီးနောင် (အဖွဲ့ဝင်)
၆. ဦးဇော်တောင် (အဖွဲ့ဝင်)
ရ. ဦးနော်ထွယ် (အဖွဲ့ဝင်)
၈. ဦးခွန်ဆိုင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၉. ဦးဆိုင်းခေါ (အဖွဲ့ဝင်) တို့ တက်ရောက်ပါသည်။
၁၀၅ မမ ပစ်မိန့်ကို ကက(ကြည်း)ကသာ အမိန့် ပေးနိုင်သည်ဟု ဦးအောင်မင်းက ဆိုပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး (KIO) ကိုယ်စားလှယ်က “ဒီလထဲမှာတင် တိုက်ပွဲပေါင်း (၉၀) ကျော်ဖြစ်ထားတယ်၊ ၁၀၅ ကို ကက (ကြည်း) က ပစ်မိန့်ရ မှ ပစ်ရတယ် ဆိုတာကို အခုမှ သူသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလ ၂၄ ရက်နေ ၂၈ ကြားမှာ KIO ကို ဗဟိုဌာနချုပ်ကို ၁၀၅ နဲ့ ၁၄ ကြိမ် ပစ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်” ဟု တင်ပြ သွားပါသည်။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ပြည်တွင်း၌ ဆွေးနွေး သွားရန် တင်ပြ သွားပါသည်။ KIO သည် အစိုးရ၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေးနှင့် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးရေး စခန်းဆင့်များကို လက်မခံကြောင်း ပယ်ချ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) သည် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ ဦးအောင်သောင်းတို့နှင့် တ ရားဝင် (၃) ကြိမ်တိုင် ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးသော်လည်း ရလာဒ်ကို ဦးအောင်မင်းတို့၏ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံပွဲဖြင့် လက်မခံ ပယ်ချခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်မင်းတို့နှင့် သုံးကြိမ်တိုင် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံမှုမှာ ယခုအကြိမ် ပထမဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရတပ်က ဖမ်းဆီးထားသည့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း တပ်သားသစ်များ (ဓာတ်ပုံ – မြဝတီ / Facebook)
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်ထဲတွင် စစ်သင်တန်းပြုလုပ်နေသော ရှမ်းပြည်တပ်မတော် – မြောက်ပိုင်း (SSA-N) တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၈ ဦးကို အစိုးရတပ်များက ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မူဆယ်ခရိုင်ထဲတွင် SSA-N က အသစ်စုဆောင်းထားသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်းပေးနေကြောင်း ဒေသခံများ၏ သတင်းပို့မှုမှတဆင့် နယ်မြေခံ အစိုးရ စစ်ကြောင်းက ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ စစ်တပ်အာဘော် မြဝတီ အွန်လိုင်းသတင်းစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ဖြစ်စဉ်တွင် ပြောက်ကျား ယူနီဖောင်း ဝတ်ဆင်ထားသော သောင်းကျန်းသူ ၄၈ ဦးအား အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားကြောင်း” ဟု မြဝတီ အွန်လိုင်း သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
သင်တန်းပေးနေသူများသည် SSA-N ဝမ်ဟိုင်း ဌာနချုပ် တပ်မဟာ (၁) လက်အောက်ခံ တပ်အရာရှိများဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်မြေခံ အစိုးရ စစ်ကြောင်းက ယင်းသို့ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာတွင် ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး SSA-N ခေါင်းဆောင် တချို့လွတ်မြောက်သွားပြီး နှစ်ဦးကျဆုံးသွားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအနက် တပ်ကြပ်ကြီး အဆင့်ရှိသူ အိုက်ရီ (ခေါ်) ရီဆာ အပါအဝင် စိုင်းဆမ်လှ၊ ကွန်ခမ်းနှင့် လှခိုင်တို့မှာ ဝမ်ဟိုင်း ဌာနချုပ်မှဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၄ ဦးမှာ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူနှင့် လားရှိုး အပါအဝင် မြို့/ရွာ ရ ခုမှ အဓမ္မ လူသစ် စုဆောင်း ခံရသူများဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
နယ်မြေခံ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များက စုဆောင်းခံထားရသော တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၄ ဦးကို သက်ဆိုင်ရာ မိဘ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနေလျက်ရှိပြီး တရားဝင်လွှဲပြောင်း အပ်နှံပေးသွားမည်ဟုဆိုသည်။
၎င်းတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၈ ဦး အစိုးရ စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခံရမှု၊ နှစ်ဦး သေဆုံးမှု၊ တပ်သားစုဆောင်းမှုတို့ကို SSA-N ကလည်း မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ သို့သော် မြဝတီသတင်းစာ၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ တပ်သားစုဆောင်းရာတွင် အတင်းအဓမ္မ စုဆောင်းခြင်းမရှိကြောင်း SSA-N ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလှက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီပုံစံပါပဲ။ သေတာက ၂ ယောက်လို့ပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အတင်းအဓမ္မ တပ်သား စုဆောင်းတာတို့ ဘာတို့က သူတို့ ကျနာ်တို့ကို စွပ်စွဲပြောဆိုနေကျစကားပဲ။ ကျနော်တို့ အပစ်ရပ်စဲထားတာတောင် ရန်သူသဘောမျိုး သောင်းကျန်းသူလို့တောင် အခေါ်အဝေါ်မျိုးနဲ့ သုံးထားတာကိုး” ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလှက ဆိုသည်။
ယခုအခါ SSA-N နှင့် အစိုးရတို့အကြား တရားဝင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားပြီး အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား အားလုံး၏ ယုံကြည်မှုကို ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဆဲကာလတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာမျိုးမလိုလားကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
SSA-N အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုကိုသာ ရှေးရှုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်တုန့်ပြန်ခြင်း၊ အငြင်းပွားနေခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ယခုဖြစ်ရပ်ကြောင့် အစိုးရနှင့် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲများ အပေါ် ထိခိုက်မှုရှိမည် မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/SSA) တာဝန်ရှိသူများနှင့် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ လားရှိုးမြို့တွင် ယခုလ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံမှုတွင် နယ်မြေဖွ့ံဖြိုးရေးကို ဇောင်းပေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စစ်ရေး တင်းမာမှုအခြေအနေကို မဖြေရှင်းဘဲ ချန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
SSA မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် အချက် အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ယင်းသို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် ယခု အောက်တိုဘာလထိ တိုက်ပွဲပေါင်း ၄၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလှက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ)
အခုလောလောဆယ်မှာ အဆိုးထဲက အကောင်းဆိုသလို တစ်ဖက်မှာ သေမိန့်ကျရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အများနားလည်ထားကြတဲ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အရင်ကနဲ့စာရင် အချိန်ပိုရသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် စာတွေ ပိုပြီး ဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် ဒီကနေ့ စာဖတ်သူအများစုကို သူ့ထက်ငါကောင်း အပြိုင်အဆိုင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်နေကြတဲ့ ဂျာနယ် တွေကို ပိုပြီးတော့လည်း များများ၊ ပိုပြီးတော့လည်း စူးစူးနစ်နစ် ဖတ်ဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်ပါ သတင်း ဆောင်းပါး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေထဲက ကျွန်တော့်အာရုံမှာ လာငြိ တာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Voice ဂျာနယ်ထဲက ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးရဲ့စကား တစ်ခွန်း ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ သူ့စကားက ဒီလိုဗျာ။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမူ လို့ လက်ခံလာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိလာတယ်။ အဘိုး၊ အဖေနဲ့ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြီး ဖယ်ဒရယ်ကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တာဗျ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် အစိုးရကို ကိုယ် စားပြုပြီး စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ယခင် မီးရထား ၀န်ကြီး၊ ယခု သမတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဟာ ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က တိုင်းမှူးအဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်အရာရှိ ဟောင်းကြီးတစ်ဦး ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ဦးခွန်ထွန်းဦးစကားအရ ဖယ်ဒရယ်မူကို ခွဲထွက်ရေးမူအဖြစ် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လောက် သဘောထားလာခဲ့ကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ အဲဒီအမြင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့ သဘောလို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့သွားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက အကြောင်းပြချက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ အကြောင်းကတော့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုဟ်၊ သူ့အခေါ် ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ ပြည်သူလူထု အများစုကြီး အခေါ် ဆိုရှယ်လစ်အရေခြုံတစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ထူထောင်ရာမှာ သူ အဓိက ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြ ချက်က အဲဒီဖယ်ဒရယ်မူ ဖြစ်တယ်ဗျ။
၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ ခွဲထွက်ခွင့် တစ်နည်း ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်း ပြုပြီး ပြည်နယ် တစ်ခုက ခွဲထွက်ဖို့ ကြံစည်ကြိုးပမ်းလာတာကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲသွားရလေအောင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို တပ်မတော်က ရယူ ထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီတုန်းက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက တိုင်းပြည်ကို အသိပေး ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဟာ အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ(ပထစအစိုးရခေါင်းဆောင်ေတွေနဲ့ ရှမ်းစော်ဘွား အများစုကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စ)ပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော်က ဘာကြောင့် အာဏာသိမ်းရတယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို တရားဝင် အသိပေးကြေညာဖို့ အကြံရကျပ်နေတုန်း သူ့လက်ထောက် စစ်ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦးက ကြေညာချက်တစ်စောင် ရေးယူလာတယ်။
အဲဒီကြေညာချက် ထဲမှာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲရတော့မယ် အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အတွက် အာဏာသိမ်းရတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ဖတ်ကြည့်ပြီး
“အေး ကောင်းတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ရေဒီယိုက အသံလွှင့် ကြေညာလိုက်” လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်သာ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဟာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကို တကယ်ပဲ စိုးရိမ်ပြီး အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပဲ သိမ်းချင်လို့ သိမ်းပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူ နဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမယ့် အနရာယ်ဆိုတာကို တမင်သက်သက် ဆင်ခြေဆင်လက် ဆင်နားရွက်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ထားပါတော့ဗျာ။ အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရော၊ အဲဒီကြေညာချက်ရေးယူလာတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီးရော၊ အဲဒီအာဏာသိမ်းပွဲ ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် အကုန်လုံးနီးပါး လောက်မရှိကြတော့ပြီမို့ ဒီကိစကို အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်လုပ် မနေချင်တော့ပါဘူးဗျာ။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက
”ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ မဲ့ အနရာယ် အမှန်တကယ်ရှိနေပြီလို့ ကျုပ်ကို နှစ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြိုပြောပါ။ အာဏာသိမ်းစရာမလိုပါဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တပ် မတော်ကို အာဏာအပ်မှာပါ”
လို့ ပြောခဲ့တာကို ၁၉၆၆ခု စက်တင်ဘာလက သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ရပြီး သတင်းရေး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုလည်း အခုအချိန်မှာ မရှိတော့ပြီမို့ ဒီကိစ္စကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ … လို့ ဆိုရတော့မပေါ့ဗျာ။
ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် အာဏာသိမ်းတာလား။ အာဏာသိမ်း ပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်းပြချက်ဆင်ခြေအဖြစ် ဆွဲသုံးသလား ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့လို့ ရကောင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့် ရာဇဝင်ထဲမှာ မနေရစ်ခဲ့ဘဲ အဲဒီနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ လိုက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ မြန်မာပြည်သူ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ အထူး သဖြင့် မျိုးဆက်သစ် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်အများစု စိတ်ထဲ ဖယ် ဒရယ်မူဆိုတာကို ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲရေးလမ်းစအဖြစ် စွဲနေကြတဲ့ကိစ ဖြစ်တယ်ဗျ။
တကယ်ပဲ စိုးရိမ်လို့လေလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ အာဏာ သိမ်းတဲ့ကိစကို တရားမျှတတယ် (justify) လို့ အများက မြင်အောင် လေလားတော့မသိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနဲ့သူ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခု (တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ)က အဲဒီအချက်ကို ထပ်တလဲလဲ သံမှိုနှက်သလို နှက်ခဲ့ တာကြောင့်လည်း အဲသလို စွဲနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ဖယ်ဒရယ်မူကို ရိုးရိုးသားသား စိုးရိမ် စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရိုးမသား အသုံးချခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကတော့ အဲဒီ ပုစ္ဆာကို ပဟေဠိအဖြစ်ထားခဲ့ပြီး လောကထဲက ထွက်သွားခဲ့ပြီမို့ သူ့ အတွက်တော့ ပြသနာမရှိတော့ဘူးဗျာ။ ပြသနာရှိနေတာက ဖယ်ဒရယ် မူကို ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲရေးမူအဖြစ် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အဆက် ဆက်က သဘောထားနေခဲ့ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည် တွင်းစစ်မီးမငြိမ်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကိစြ္စဖစ်တယ်ဗျ။
တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင်တွေက ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတဲ့စကား ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြောတဲ့သူကို မျက်ထောင့်နီကြီးတွေနဲ့ ကြည့်၊ ဖယ်ဒရယ်မူကို ကိုင်စွဲပြီး မိမိ လူမျိုးစု အခွင့်အရေး (nationality’s rights)အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေ သူတွေကို လူမျိုးစုသောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ် ရှုမြင်လာကြရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမနီး ဖြစ်လာခဲ့တာ အခုတိုင်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှ မရ တော့လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကာမှာ မပြောနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ တောင် ဓားမနောက်ပိတ်ခွေးဖြစ်တာ ဘာဆန်းသလဲဗျာ။
ပြန်လည် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခွင့်ရှိ
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အကျိုးဆက် အဖြစ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်လည်း အတော်ကလေးရလာနေပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပြောနေ ဆိုနေ ရေးနေ သားနေကြပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ် အဓိပာယ် အစစ်အမှန်ကို ပြည်သူတွေ အတော်ကလေး သဘောပေါက် နားလည်နေကြပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်ဗျာ။ တပ် မတော်သားတွေလည်း ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့အရင်တုန်းက ရှိထားခဲ့တဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုဟာ မှန်မမှန်ဆိုတာကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခွင့်ရရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဦးအေးသာအောင် အခန်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ ပင်လုံနဲ့ ဖယ်ဒရယ် ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရှုခဲ့ကြသူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အတိတ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိပြီး အနာဂတ် အတွက် မြော်မြော်မြင်မြင်နဲ့ တွေးဆနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်ဗျ။
တကယ်တော့ ၁၉၆၁ အစောပိုင်းကာလမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်အချို့ (အထူးသဖြင့် ရှမ်းစော်ဘွားတွေ) ပြည်ထောင်စု အစိုးရကို အရေးဆိုဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာက ခွဲထွက်ခွင့်တောင်းဖို့ မဟုတ် ဘူးဗျ။ ပင်လုံညီလာခံမှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံမူများမှ တစ်စတစ်စ သွေဖည်လာပြီး တစ်နေ့တခြားတိုးတက် ဆုံးရှုံးလာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအခွင့်အရေးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဗျ။
တစ်နည်းပြော ရရင် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးတွေကို လက်တွေ့မှာ အမှန်တကယ်ရရှိရေး တောင်းဆိုဖို့သာ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ နိုင်ငံရေးရဲ့သဘာဝအတိုင်း အကျပ်ကိုင်တာ ဖိအားပေးတာ စျေးဆစ်တာ စျေးကိုင်တာတွေတော့ ပါချင်လည်းပါမှာ ပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အများစုက ပြည်ထောင် စုက ခွဲထွက်လိုစိတ်မရှိကြတာတော့ ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် သေချာတယ်ဗျာ။
သူတို့ အဓိကလိုချင်ကြတာက ပြည်ထောင်စုအာဏာနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ အာဏာကို ပင်လုံညီလာခံ (တစ်နည်း)၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေပါ ဖော်ပြချက်တွေအတိုင်း တိတိကျကျ ခွဲဝေပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထောက်အထားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလို့ တရားဝင် ခေါ်ထားပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေကတော့” ပြည်ထောင်စု အမည်ခံ တစ်ပြည်ထောင်တည်း” အဖြစ် တစ်လျှောက်လုံး ရှုမြင်ခဲ့ကြ တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ကြတယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရင်ထဲက အဲဒီအမြင် ပပျောက်လွင့်စင် သွားအောင် လူများစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေက လုပ်ဆောင်ကြ ရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒီတော့မှသာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့မယ့် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ သေနတ်သံ တွေ မစဲသေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားရတိုင်း လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ဗိသုကာ၊ အမျိုးသားခေါင်း ဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကား တစ်ခွန်းကိုပဲ အမြဲ ကြား ယောင်မိတယ်ဗျာ။ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပြည်နယ် ခွဲထွက်ခွင့် ပုဒ်မထည့်ဖို့ ကိစကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တချို့က ကန့်ကွက်ကြတော့ ဗိုလ်ချုပ်က …
“အိုဗျာ..ဒီဆယ်နှစ်အတွင်း ပြည်နယ်တွေ ခွဲမထွက်ချင် အောင် ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒီလိုမှ မကြိုးစားနိုင်ရင် ကျုပ်တို့ ညံ့လို့ပေါ့”
လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပါ တယ်ဗျာ။ နှစ်ပေါင်းအရာအထောင် တမြေတည်းနေ တရေတည်း သောက်လာခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စုပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး မပြိုကွဲရလေအောင် လူများစု လူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေက တရားမျှတ လွတ်လပ် ခြင်းနဲ့မသွေ တန်းတူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး စတင် ကြိုးပမ်းသင့်ကြဖို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျာ။
(မှတ်ချက်။ ။ ၁၉၆၁-၆၂မှာ အတိအလင်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရှမ်းမူလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူ အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာလိုသူများ ‘မြန်မာ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန်များ ရေးသားပြုစုရေးအဖွဲ’ က စိစစ် ထုတ်ဝေတဲ့ ]]၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး}} တတိယတွဲ အခန်း၁၃၊ ယင်းစာအုပ် စတုတတွဲ အခန်း ၁၄၊ အခန်း ၁၅၊ အခန်း ၁၆၊ ထို့အပြင် အခန်း ၁၇ စာမျက်နှာ ၂၃၅ အောက်ခြေမှတ်စုပါ ၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ပြည်လမ်း အသံလွှင့်ရုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး) ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် တို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုလေ့လာ ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း။)
၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂
ယခုအပတ်ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ပါ မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ KIO ဆွေးနွေးပွဲ စတင်
မနေ့က အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တရုတ် နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ဖို့ KIO က တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ KIO လက်အောက်ခံ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ရဲ့ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် အပါအဝင် အရေးပါတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မပါ၀င်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် တရားဝင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ KIO က တစ်လျှောက်လုံးတောင်း ဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရးအရ စတင်ဆွေးနွေးရေးကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက သဘောတူ လိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ KIO တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း အပြည့်အစုံကို ရွှေလီမြို့ကနေ ဗီအိုအေဝိုင်းတော်သား ကိုရော်နီညိမ်းက သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့က ချင်ချန်းဟိုတယ်မှာ ကျင်းပသွားတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ ကေအိုင်အို လက်အောက်ခံ ကေအိုင်အေ ကချင်လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နှစ်ဖက်တပ်တွေ နေရာချထားမှုကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲ မစခင်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မီတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းက ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒီနေ့ကတော့ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်တယ်။ တပ်တွေကို ရွေ့ဖို့ကိစ္စပေါ့။ အဲဒါတွေ ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့လည်း တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့လူတွေ ပါဖို့ လိုတာပေါ့။ ကျနော်တို့ဖက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး ပါလာတာပေါ့။ ကချင်ဖက်က ဘယ်သူ ပါလာမလဲ ကျနော်တို့လည်း မသိသေးဘူး။ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့လူတွေ ဆောင်ရွက်မှပဲ ပီးမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အစည်းအဝေး မစခင်မှာတော့ ကျနော်လည်း ပြောလို့ မရသေးဘူးပေါ့။”
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ချင်ရိုင်းမှာ တကြိမ်၊ ဇွန်လ ထဲမှာ ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယံမှာ ၂ ကြိမ်နဲ့ စုစုပေါင်း ဦးအောင်မင်း နဲ့ ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်တွေ အလွတ်သဘော ၃ ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တရားဝင် ဆွေးနွေးကြတဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ကေအိုင်အေ ကချင်လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ရဲ့ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်အပါအဝင် အရေးပါတဲ့ ကချင် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မတက်ရောက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတာကြောင့် ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ တပ်ကိုပစ်ပြီး လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း မရှိတာလို့ ကချက် လွှတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ခေါင်းဆောင် ဦးဆွမ်လွတ်ဂန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသော ပြည်တွင်းစစ်ဟာ စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် မဟုတ်ပဲ၊ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်မည်ဟု ခံယူပါသည်။ တိုင်းရင်းသား ကချင်လူမျိုးများ အပါအဝင် တခြားသော တိုင်းရင်းသားများအားလုံး လုံခြုံ ဘေးကင်းစွာ ရပိုင်ခွင့် တူညီစွာဖြင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုတစ်ရပ် အတွင်း၌ စုပေါင်းနေထိုင်ခွင့် အာမခံချက် ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်များ မထားရှိသော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး မှုအား ကနေ့ ဤတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုမှ စတင်သွားလိုပါကြောင်း အဆိုပြု တင်ပြ ဆွေးနွေး အပ်ပါသည်။”
ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် မပါ၀င်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာအစိုးရဖက်က ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ စစ်ရေး စစ်ရာတွေကို တာဝန်ခံ ဆွေးနွေးသွားဖို့ တက်ရောက်လာတဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့ (၁) ရဲ့ ကစလမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးဟာလည်း မူဆယ် မြို့မှာပဲ နေရစ်ခဲ့တယ်လို့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးလည်း သူ့အနေနဲ့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ သူက လိုက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ ဟိုဘက်က ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်လည်း မပါလာဘူးဆိုတာ သိရတဲ့အခါကျတော့ သူက အခု မူဆယ်မှာပဲ စောင့်နေတယ်။”
ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာဖက်က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ၀န်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း၊ ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်တို့ကလည်း ပါ၀င် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်တိုင်းမှူးတွေဖြစ်ကြတဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်နဲ့ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုးတို့ကလည်း နယ်မြေ အခြေအနေတွေနဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်တွေနဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့ရဲ့ အနေအထားတွေကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က နိုင်ငံရေး စတင် ဆွေးနွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး စတင် ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးဖို့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကို ၀မ်းသာစရာပဲ ဆိုတာလိုပဲ၊ ဟုတ်လား အခု ကျနော်တို့ ထမင်းစားဖို့အချိန်ရောက်ရင် ထမင်းစားမယ်။ ထမင်းစားပြီးလို့ ထပ်ဆွေးနွေးချင်လည်း ထပ်ဆွေးနွေးမယ်။ အမြဲတမ်း ထိတွေ့နေတာကိုက တယောက်နဲ့တယောက် မြင်ပါများတော့ ခင်တယ်။”
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဟာ နောက်တကြိမ် ကေအိုင်အိုနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ မှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုနဲ့ စတင်မယ်လို့ သဘောတူညီခဲ့တဲ့ အပေါ် ဒီကနေ့ ကေအိုင်အို ဆွေးနွေးမှု အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးဆွမ်လွတ်ဂန်ကို ဗွီအိုကေ သဘောထား မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ တလျောက်လုံး တောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မယ်၊ လုပ်ရအောင်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရတွေက မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒီနေ့ လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ သူတို့က ၀န်ခံ လိုက်တယ်လေ၊ တာဝန်ယူတယ်။ ဒါက ဆိုပါတော့လေ အောင်မြင်တယ်ပေါ့။”
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကော်မီတီနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ကေအိုင်အို တို့ရဲ့ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကနေ နောက်တကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာပြည်အတွင်းက ဗန်းမော်လို၊ မူဆယ်လို နေရာတွေမှာ ဆွေးနွေးသွားရေး ဦးအောင်မင်းက တင်ပြသွားတာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာက ဒါက ဆုံးဖြတ်ထားတာ၊ အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက သူတို့က အဆိုပြုတာလေ။”
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဖက်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီနဲ့ ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အေတို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဟာ တရက်ထဲနဲ့ ပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ စစ်ရေးကိစ္စတွေကို မဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း နောက်တကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ဒီစစ်ရေးကိစ္စဟာ ပါ၀င်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရတပ် နှင့် တိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းတပ်တို့ တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွား
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်နှင့်နမ့်ခမ်းမြို့နယ် အကြား စယ်နေကျေးရွာအနီးတွင် အစိုးရတပ် နှင့် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းတပ်တို့အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပလောင်ဒေသတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA နှင့် ပလောင် လွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော် TNLA စသောပူးပေါင်းတပ်များကမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးစည်းရုံးရေးဆင်း နေချိန် အစိုးရစစ်တပ်က လိုက်လံနှောင့်ယှက်သဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု တအာင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အတွင်းရေးမှူးမိုင်းဘုန်းကျော်ကပြောပါသည်။
“ကျနော်တို့ ပူပေါင်းတပ်တွေက တရွာဝင်တရွာထွက် နယ်လှည့် ဆွေးနွေးရေးဆင်းနေတုန်း မှာ အစိုးရတပ်ကနောက် ကနေလိုက်လာတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တော့တာဘဲ။ မနက် ၉ နာရီ ကနေ နေ့ လည် ၁း၃၀ နာရီအထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ် ၊ ဒီနေ့အထိတော့အစိုးရတပ် ဘက်ကကျနော်တို့ ရှိနေတဲ့ နေရာ မှန်း ပြီးလက်နက်ကြီး နဲ့ ပစ်နေသေးတယ် ၊ ကျနော် တို့ တပ်ကိုတော့မထိ ဘူး”ဟု မိုင်းဘုန်းကျော်က ပြောပြသည်။
ဤတိုက်ပွဲသည် အစိုးရတပ် ခမရ(၅၀၁)နှင့်ခလရ(၁၄၄)ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်း ဖြစ်ပြီး ၊အစိုးရ ဘက် က (၈) ယောက် သေ (၁၀)ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိနေကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရ သူများအား ယမန်နေ့က မိုင်းဝီးဆေးရုံ မှသယ်ထုတ် သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်း မည်သည့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်မည်ကိုမူ မသိရသေးကြောင်း၄င်းကဆက်လက်ပြောပြသည်။
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည်ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ဒေသဖြစ်သည့်နမ့်ဆန်နှင့်မန်တုံမြို့နယ် ထဲတွင်တပ်ရင်း (၁၀) ရင်း ထက်မနည်း လှုပ်ရှားနေကြောင်း ၊နမ့်ခမ်းမြို့ နှင့် မန်တုံမြို့နယ်ရှိ ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကာ အစိုးရကတပ် အင်အားပိုမိုတိုးချထားကြောင်း သူကဆက်ပြီးပြောပြသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ အပစ်ရပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက် နေသော်လည်း တအာင်းအမျိုးသား လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကိုမူ ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းထားခြင်း မရှိသေးဘူး ဟု အတွင်းရေးမှူး မိုင်းဘုန်းကျော် က ဆိုသည်။
ထို့အတူ အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရတို့ ယနေ့ အောက်တို ဘာလ ၃၀ ရက် ရွှေ လီမြို့့၌ တွေ့ဆုံသော်လည်း စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရဆက် လက်ဆွေးနွေး သွားမည်ဆိုသည့် သဘောတူညီမှုဖြင့်သာ ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။
Sunday, October 28, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ မြောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကေအန်ယူ လေးဝါးခ စခန်းမှာ အောက်တိုဘာ ၂၅ နဲ့ ၂၆ ရက် တွေမှာ ကေအန်ယူ ဗဟို အမြဲတန်း ကော်မတီရဲ့ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကို ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် ခဲ့တဲ့ ဗဟို အမြဲတန်း ကော်မတီနဲ့ အရံ အမြဲတန်း ကော်မတီ ၄၀ ဟာ မဲခွဲတာတွေ မလုပ်ဘဲ ၊ ညီညွတ်ရေးနဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကျိုးအတွက် ကေအန်ယူ ထဲက ထုတ်လိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးကို မူလ ရာထူး တွေမှာ ပြန်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ညှိုနှိုင်း နိုင်ခဲ့တာလို့ ကေအန်ယူ ပြောခွင့်ရသူ ဗဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘားအံ မြို့မှာ ဖွင့်လှစ် ခဲ့တဲ့ ကေအန်အဲလ်အေ တပ်မဟာများ ဆက်ဆံရေး ရုံးကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကေအန်ယူနဲ့ အစိုးရ ပြုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကနေ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ ဒီရုံး တွေကို ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တချို့က သိပ်ပြီး မြန်ဆန်လွန်း နေတယ်၊ တချို့က အခုလို ဆက်ဆံရေး ရုံးတွေဖွင့်တာ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆကြ ရာကနေ ခေါင်းဆောင် တွေအကြား သဘောထား ကွဲလွဲ ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ အားလုံး ပြေလည် သွားပြီ ဖြစ်လို့ ကေအန်ယူနဲ့ အစိုးရ ပြုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ တွေကို မူလ အစီအစဉ် အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရသူ ဗဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောကြား သွားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များ တပ်ပေါင်းစု စစ်ဆင်ရေးကို အဆင့်မြှင့်နေ
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA)၊ တအာင် (ပလောင်) ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TSLA)နှင့် ရှမ်းပြည်တိုး တက်ရေး တပ်မတော် (SSA) တို့ ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့က အစိုးရ ခမရ (၅၀၁)နှင့် ခလရ (၁၄၄) ပူးပေါင်း စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်း မြို့နယ်နှင့် ကွပ်ခိုင်မြို့နယ်ခြားရှိ စယ်နေ ကျေးရွာ အနီးတွင် ယမန်နေ့ (၉) နာရီတွင် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း တအာင် (ပလောင်) ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ပြောခွင့် ရသူ မိုင်ဖုန်းကျော်က ဆိုပါသည်။
“ကျနော်တို့ တပ်ပေါင်းစုက နယ်လှည့် စည်းရုံးရေး ဆင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အစိုးရ စစ်ကြောင်းက နောက်ကနေ လိုက်လာလို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွား ခဲ့တာပါ။ တိုက်ပွဲကတော့ (၅) နာရီခန့် ကြာသွားတယ်။ ကြိုကြားပေါ့။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ အစိုးရ ဖက်က (၃) ဦး သေပြီး (၈) ဦး ဒါဏ်ရာ ရတယ်လို့ မိုင်းဝီးဆေးရုံမှာ တွေ့ကြတယ်လို့ မျက်မြင် ရွာသား တွေက ကျေနော်တို့ကို ပြောပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစု တပ်ဖွဲ့သည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်နှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ဒေသတခွင်၌ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ် နေစဉ် အစိုးရ စစ်ကြောင်း တို့က နောက်ယောင်ခံ လိုက်လာ သောကြောင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် မန်ဆန်မြို့နယ်၊ မန်တုံမြို့နယ်။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်နဲ့ နမ်းခမ်းမြို့နယ်ထဲ ဒေသ ထဲတွင် တပ်ရင်း (၁၀) ရင်း ထက်မနဲ လှုပ်ရှား နေပါသည်။ ဗျူဟာမှူးများမှာ မန်ဆန်း၊ မန်တုံနှင့် နမ်းခန်း (မိုင်းဝီ) ၌ အခြေစိုက် ကြပါသည်။ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးသည် ပြီးခဲ့သည် အောက်တိုဘာ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မန်တုံမြို့၌ လာရောက် ညွှန်ကြား ခဲ့ကြပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပန်ဆေး ပြည်သူ့စစ်နှင့် ပူးပေါင်း ထားသည့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့နှင့် သာပန်းကုန်း- ရှောက်ပန်းကုန်း ကျေးရွာ အနီးတွင် တပ်ပေါင်းစု တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ဤအချိန်မှ စပြီး အစိုးရ၏ စစ်ဆင်ရေးသည် ပိုမို တိုးမြှင့် လှုပ်ရှား လာခဲ့ပါသည်။
ပန်ဆေး ဒေသ တည်နေရာသည် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းသည့် ဒေသဖြစ်ပြီး၊ မြောက်ဖက်ခြမ်းတွင် အစိုးရ အားပေး ထားသော ဘိန်းခြံ စိုက်ပျိုးရေးများ ရှိနေပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ် နေသော ဒေသဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယမာန်နေ့ တိုက်ပွဲကြောင့် ထိုနေ့ ညနေပိုင်း၌ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လှိုင်း လမ်းမကြီး တလျှောက်တွင် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ အင်အား တိုးချဲ့ နေရာ ယူထားကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစု ဘက်မှလည်း အင်အားများ ဆက်လက် ဖြည့်တင်း ထားကြောင်း ဆိုပါသည်။
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ရှေတန်း တပ်ဖွဲ့ *အင်တာနက်*
ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ့်ခမ်း နယ်ထဲ၌ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) တပ်ဖွဲ့များ ရှိပြီး တအာင် (ပလောင်) ပြည် လွတ်မြောက် ရေး တပ်မတော်မှ တပ်ရင်း (၄) ရင်း ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့သည် (၁၁၂) ကွတ်ခိုင်ဒေသ၊ (၂၅၆) က နမ့်ဆန် ဒေသ၊ (၃၆၇) မန်တုံဒေသ၊ (၄၇၈) နမ့်ခမ်း နယ်ထဲ၌ လှုပ်ရှားနေပြီး ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ၏ နမ့်မဂွင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း လှုပ်ရှား ကြပါသည်။
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIO)၊ တအာင် (ပလောင်) ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် ရှမ်းပြည်တိုး တက်ရေး တပ်မတော် တို့သည် သွေးစည်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး တပ်မတော်သည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော်လည်း ရာဇသံ အကြိမ်ကြိမ် အပေးခံရသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရ၏ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်း ပြီးခဲ့သည် စက်တင်ဘာ (၆) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ တြိဂံတိုင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ ဒုဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။ ဤတွေ့ဆုံပွဲ၌ တပ်ချုပ်သည် ၀တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ကချင်နဲ့ ပလောင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် စစ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မပြုရန် တိုက်တွန်း သွားခဲ့သည်ဟု နီးစပ်သူ တဦးက ဆိုပါသည်။ http://www.mwdmedia.net/2012/10/uwsa-ndaa.html
အစိုးရမှ မည်သို့ပင် တိုက်တွန်း နေစေကာမူ တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး မကြေညာရဲသဖြင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ သည် အပစ်ပင် ရပ်စဲထား သော်လည်း အစိုးရအား သံသယဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် အစိုးရ တိုက်တွန်း နေမှုသည် အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ရေး လေ့လာ သူများက ဆိုပါသည်။
အလားတူစွာပင် UNFC အဖွဲ့ထဲ၌ အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်သော အဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့နှင့် အပစ် မရပ်ရသေးသော အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ဟူ၍ ရှိပါသည်။ အထက်ပါ သံသယကြောင့် အပစ်မရပ်ရသေးသော အဖွဲ့များသည် နယ်မြေ အနေအထား အရ ဆက်စပ်မှု ရှိသော ဒေသ၌ တပ်ပေါင်းစုအသွင် ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေးများ လှုပ်ရှားနေသလို အပစ်ရပ် ထားသော အဖွဲ့များနှင့်လည်း နိုင်ငံရေး အရ ဆက် လက်လက် တွဲနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Saturday, October 27, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်မည့် ရပ်ရွာအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Community Driven Development – CDD) သည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် ဒေသများ အတွက်သာ ပါ၀င်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ခန်သန်ရှန်ကာ (Kanthan Shankar) က ပြောသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် အိုးအိမ်ပစ်ခွာ တိမ်းရှောင်ရသူတချို့ကို ကရင်ပြည်နယ်တနေရာတွင် ယမန်နှစ်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – FBR)
“ကျနော်တို့ဟာ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးမှာ ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CDD လိုမျိုး အစီအစဉ်တွေကို အပစ်ရပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ လုပ်ပါမယ်။ အဲဒီဒေသက ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။ CDD နဲ့တော့တူမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအစီအစဉ်လုပ်ဖို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့နေရာ ဖြစ်ရပါမယ်” ဟု မစ္စတာ ခန်သန်ရှန်ကာက မြန်မာနိုင်ငံမှ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရပ်ရွာအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ သတ်မှတ်ထားပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၃ တွင် စတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ စီမံကိန်းများကို မည်သည့် ပုံစံဖြင့် ဖော်ဆောင်မည်ဟူသော စီမံကိန်းအစီအစဉ်ကို နို၀င်ဘာလတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဘုတ်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ချက် ချတော့မည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ရပ်ရွာအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ် အကောင် အထည်ဖော်ရန် မြန်မာအစိုးရ၏ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကို ရွေးချယ်ထားပြီး ရန်ပုံငွေများသည် ယင်းဌာနမှတဆင့် စီးဆင်းမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ စီမံမည်ဖြစ်သောကြောင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးနှင့် ခြစားမူ ကင်းစင်ရေးအတွက် သံသယရှိသော်လည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လမ်းညွန်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ကို်င်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနည်းလမ်းသည် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အရှေ့တီမော၊ အင်ဒို ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်လည်း အသုံးတည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ခန်သန်ရှန်ကာက ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ CDD အစီအစဉ်သည် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် နိုင်ငံများတွင် အလျင်အမြန် နာလန်ထနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး လမ်းဖောက်၊ တံတားဆောက်၊ ရေကန်တူးခြင်းကဲ့သို့သော ဒေါ်လာ ၂ သောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ကုန်ကျမည့် အသေးစား စီမံကိန်းများဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခုမှ ဆင်းရဲမွဲတေပြီး အစိုးရအထောက်အပံ့ ပြတ်လပ်နေသည့် မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် အကောင်အထည် ဖော်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့အပေါ် တင်နေသည့်် အကြွေးများကို ၂၀၁၃ အမီ ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကြွေးဟောင်းများကင်းပါက ကြွေးသစ်များ ချေးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အကြွေးများ ဆပ်ပြီးပါက စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်မီးကဏ္ဍနှင့် အများပြည်သူအတွက် ကြီးမားစွာအကျိုးရှိမည့် ကဏ္ဍများတွင် ၀င်ရောက်မြှုပ်နှံလိုသည်ဟု မစ္စတာ ခန်သန်ရှန်ကာက ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးရာတွင် ကြားဝင် ပေးပါရန် ဂျပန် အစိုးရအား UNFC တောင်းဆို
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် သွေးစည်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) သည်၊ နိုင်ငံရေး အရ အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့် အခါ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပေး ပါရန် ဂျပန် အစိုးရအား တောင်းဆို ထားခဲ့သည်ဟု ပြောခွင့်ရသူ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ဆိုပါသည်။
“ ပါ၀င်မယ် မပါ၀င်ဘူး ဆိုတာ ကိုတော့ ကျနော်တို့ကို သူတို့ အကြောင်း မပြန်ကြား ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေး နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဦးအောင်မင်း ကတော့ လာမဲ့ နိုဝင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ UNFC နဲ့ တွေ့ချင်တယ် ဆိုပြီး လူလွှတ်ပြီး အကြောင်း ကြားတာတော့ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဖက်ကတော့ လောလောဆယ်မှာ လူမစုံ သေးတော့ ဒီကိစ္စကို မဆွေးနွေးရသေးလို့ သူတို့ကို အကြောင်း မပြန်ရသေးပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
UNFC သည် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့နှင့် ရယူခြင်း မရှိသေးသည့် အဖွဲ့ (၅) ဖြင့့် စုပေါင်း ထားပါသည်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရယူထားသော အဖွဲ့များသည် ဤနှစ်မကုန်မှီ၌ စုပေါင်းပြီး အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးရန် သဘော တူထားပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် UNFC နှင့် နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်က ဆိုပါသည်။
အပစ်မရပ်ရသေးသော အဖွဲ့များလည်း ပူးပေါင်း ပါ၀င်နိုင်သည်ဟု အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါသည်။ သို့သော် ထိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရယူခြင်း မရှိသေးသော တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များက ပါ၀င်လိုခြင်း ရှိမရှိ ကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။
ဂျပန်ရောက် UNFC အဖွဲ့ဝင်များ
သို့သော် UNFC သည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့၌ နိုင်ငံရေး အရ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမည် ဆိုလျှင် ကိုင်စွဲရ မည့်မူကို ချမှတ် ထားပါသည်။ ဤမူအတိုင်း UNFC ကကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေး နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကူအညီ ပေးရေး ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီး နိပွန် ဖေါင်ဒေးရှင်းသည် မကြာခင်၌ UNFC နှင့် တွေ့ဆုံရန် ရှိပါသည်။ ဤတွေ့ ဆုံပွဲ၌ UNFC နှင့် အစိုးရတို့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တောင်းဆိုထားသော ဂျပန် အစိုးရ ကြားဝင် ညှိနှိုင်း ပေးရေး ကိစ္စ အခြေအနေကို သိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့် နေပါသည်။
အကယ်၍ ဂျပန် အစိုးရ အနေဖြင့် မပါ၀င် နိုင်ပါက နိပွန် ဖေါင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် ပါ၀င်ပေးရန်လည်း ဂျပန် အစိုးရအား တောင်းဆို ထားပါသည်။
ခေါင်းဆောင်တွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှု သင်ပုန်းချေလိုက်ကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ပြောဆို
အောက်တိုဘာလ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ရှေးရှု၍ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးပြီး သင်ပုန်းချေလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU က ယနေ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံခရိုင် ကေအဲန်ယူထိန်းချုပ်နယ်မြေ လေးဝါးစခန်း၌ အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်မှ ၂၆ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ် သော ကေအဲန်ယူ၏ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီနှင့် ဗဟိုအရံအမြဲတမ်း ကော်မတီဝင် ၄၀ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ထုတ်ပယ်ခံရသော ခေါင်းဆောင် ၃ဦး၏ ကိစ္စကို အချေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ယင်းသို့ သင်ပုန်း ချေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက “ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ သူ့ ဘက်က သူမှန်၊ ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်မှန်နဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ရှေ့ရှုပြီး သင်ပုန်းချေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကို မူလ တာဝန်ပြန်ပေးပြီး ၁၅ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် အထိ ဆက်လက် တာဝန်ယူသွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများမှာ ကေအဲန်ယူ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်သာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ခေါင်းဆောင်များအားလုံး တာဝန်ခံကာ ကျေအေးခဲ့ကြကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကရင်ပြည်သူလူထုများလည်း ကေအဲန်ယူအတွင်း အုပ်စုကွဲမှုကို မဖြစ်ပွားလိုကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောလှငွေ က ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ကေအဲန်ယူ၏ သဘောထားကြေညာချက်အရ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အားနည်း ချက်များကို ခေါင်းဆောင်များမှ ဦးစီးရှေ့ဆောင်၍ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကာ အခြေခံလမ်းစဉ်နှင့်အညီ အတူတကွ ဆက်လက် ချီတက်သွားကြမည်ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မန်းငြိမ်းမောင်က “ကေအဲန်ယူအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခပေါ်မှာ တမျိုးသား လုံးက စိုးရိမ်မှုတွေ ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အလေးအနက်ထားပြီး ရေရှည် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကို ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို သင်ပုန်းချေခဲ့ပြီးဖြစ် ၍ လာမည့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ယခုလ ၃၁ရက်နေ့တွင် စတင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် ၁၅ကြိမ် မြောက် ညီလာခံကို နိုဝင်ဘာလ စတုတ္ထပတ်တွင် ကျင်းပသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
Friday, October 26, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
၁) အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှသည် ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးစီသို့
၂) မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးလား
1) Achieving Peace through Ceasefires
2) Irony of ceasefire in Myanmar
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထာင်ရေးကောင်စီ ခေါ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း RCSS/ SSA နှင့် အစိုးရတို့ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းရန် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ ယနေ့ ရောက်ရှိသည်။
ယခုလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် နယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့၌ နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံပြီး ဦးစွာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိန်းပန်မြို့နယ်အတွင်း၌ လုပ်ငန်းစဉ် (၃) ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမည်ဟု RCSS အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောဝ်ဆိုင်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် “ကျနော်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင် အဲဒီဒေသမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို မူးယစ်ဆေးကို လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတဲ့ သူတွေ လည်းရှိတယ်။ စားသုံးသူတွေလည်း ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ တောင်သူတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒီနယ်မြေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်က လူထုတွေဘဲ ခံနေရတဲ့ အခြေအနေလို့ သိရှိရပါတယ်။” ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောဝ်ဆိုင်းက ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် အခြား ဒေသများသို့ တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိပြီး လုပ်ငန်းစဉ် (၃) ရပ်အနက် ဦးစွာ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား သူများအား သတိပေး တားမြစ်ကာ မလိုက်နာသူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဒေသတွင်း ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဘိန်းဖြတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
မနက်ဖြန် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှု ဆိုင်ရာရုံး (UNODC) မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ရန်ရှိပြီး အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်သည့် ကုန်ကျစားရိတ်များအား (UNODC) မှ တာဝန်ယူပေးရန် တင်ပြ တောင်းဆို သွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
ယခု ခရီးစဉ်တွင် RCSS/ SSA ဘက်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ပေါင်ခေး ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦး လိုက်ပါသွားပြီး အစိုးရဘက်က မူးယစ်ဗဟိုမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရဲမှူးကြီး မြင့်အောင် ဦးဆောင်၍ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပြီး UNODC အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Jason Eligh လည်း ပါ၀င်မည်ဟု သိရသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စီမံချက်အရ အစိုးရနှင့် RCSS/ SSA နှစ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ လွန်ခဲ့သည့် မေလ (၁၉) ရက်နေ့က ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် အချက် (၁၂) ချက်ကို သဘောတူခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်၌ (၆) နှစ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပါရှိသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသခံများအား သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အား ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပါကဥပဒေ ၁၇-၁ ဖြင့် ဒဏ်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်ဗျူဟာမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက ပြောသည်ဟုဒေသတွင်းသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လဲချားအခြေစိုက် ရှိ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးလင်းအေးဇော် နဲ့ မြို့နယ်မှူး ကနေပြီး တော့ လဲချားမြို့နယ်ထဲက ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုခေါ်ပြီး စစ်ဆေးတယ်။ သျှမ်းတပ်ဖွဲ့ကိုဆက် သွယ် တဲ့လူရှိလား။ ထောက်ပံ့ပေးတာရှိလား။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်၊ သိရင်တော့မလွယ် ဘူး မှတ် - တဲ့။ ဥပဒေ ၁၇-၁ နဲ့မိသွားမယ်- တဲ့၊ အဲကလိုကိုခြိမ်းခြောက်တယ်” ဟု လဲချားမြို့သား စိုင်းခင်းငေါဝ်း ကပြောသည်။
ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းရော မြောက်ပိုင်းပါအစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေး အပစ်ရပ်ထားကြပြီဖြစ်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့တားမြစ်ချက်မျိုးမရှိသင့်ကြောင်းပြောရာ ဗျူဟာ မှူးက လဲချားမြို့နယ်အတွင်း၌ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အား လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ပေးမထားသဖြင့် ဆက်သွယ်၍မရကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုချိန်မှစ၍ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ တိုင်း ခလရ ၆၄ သို့ အစီရင်ခံ ရမည်ဟုလည်း အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း စိုင်းခင်းငေါဝ်းကပြောပါသည်။
လဲချားမြို့နယ် ခလရ ၆၄ တပ်သို့ မကြာသေးခင်ကမှ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး လင်းအေးဇော် ပြောင်းရွှေ့ လာကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA သည် ယခုလနှောင်းပိုင်း၌ မြန်မာအစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင် ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
KIO တော်လှန်ရေး ၅၂ နှစ်ပြည့်တွင် မြန်မာ အစိုးရတပ်စခန်းများသို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်
Thursday, October 25, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ကေအိုင်အို ၅၂ နှစ်ပြည့် အထိန်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဗဟိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် ကျင်းနေပုံ။
အောက်တိုဘာ၂၅ ရက်နေ့ကျရောက်သော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တော်လှန်ရေး (၅၂) နှစ် ပြည့် အထိန်းအမှတ်နေ့ကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ၎င်း၏ လက်နက်ကိုင်ဌာန ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)မှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-မန်မော် (ဗန်းမော်) လမ်းရှိ မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်းများကို အမြောက်များ ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာနှင့် လိုင်ဇာ-မန်မော်ကြားရှိ မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်းများသို့ KIA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် တပ်ရင်း ၁၉၊ ၂၄ နှင့် ၂၅ များမှ ၆၀ မမ အမြောက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အထိန်းအမှတ်နေ့ကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ၎င်းဝန်းကျင်တွင်ရှိသော မြန်မာအစိုးရတပ်စခန်း ၈ ခုတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ စခန်းတစ်ခုတွင် ၆၀ မမ အမြောက်ဖြင့် ၃ ကြိမ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းအရာရှိ တစ်ဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ post အားလုံးနီးပါးမှာ ပစ်တယ်။ သေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနိုင်တယ်။ Post (စခန်း) အထဲမှာပစ်တယ်ဆိုတော့။ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူး။” ဟုဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်များမှလည်း ညနေပိုင်းတွင် ၁၂၀ မမ ဖြင့် မြစ်ကြီးနား-ဂန်ဒေါင်ယန်လမ်း မြန်မာအစိုးရတပ် ခလရ (၁၀၆)မှ ၆ ကြိမ်ပစ်ပြီး ဒေါ့ဖုန်းယန် ခလရ (၁၄၂) တပ်မှ ၆ ကြိမ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း KIA အရာရှိများဆိုသည်။
ထို့အတူ မြစ်ကြီးနား-ဒေါ့ဖုန်းယန်မှ ၄ မိုင်အကွာရှိ မြန်မာအစိုးရတပ် တိန်လုံ (Ting Lung) စခန်းသို့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်မဟာ (၅) အောက် တပ်ရင်း (၂၄)မှ ၎င်းစခန်းသို့ ၂၅ ရက် ည ၈ နာရီချိန်တွင် သွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ အစိုးရတပ်မှ ၁ ဦးသေဆုံးကြောင်း ရှေ့တန်းမှ အရာရှိဆိုသည်။
“၁ မိနစ်လောက်ပစ်ပြီး ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ သူတို့ဘက်က ဒဏ်ရာရတာလဲများမယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ စခန်းအတွင်းထဲ ပစ်ပြီး ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့။”
၎င်းစခန်းတွင် မြန်မာအစိုးရတပ် ခမရ (၆၀၁)နှင့် (၃၈၇) စုပေါင်းတပ်များ ဖြစ်ပြီး အင်အား ၁၀၀ ကျော် ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထိုမြန်မာအစိုးရတပ်သည် တပ်အတွင်းအဖွဲ့လိုက် လဖ္ဘက်ရည်သောက်နေချိန် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့မြန်မာအစိုးရတပ်မှ သေဆုံးးဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားပြီး ၎င်းအစိုးရတပ်သည် ည ၁၂ နာရီချိန်ထိ အမြောက်၊ စက်လက်နက်များဖြင့် ထင်ရာစိုင်း ပစ်ခတ်နေကြောင်း အရာရှိများဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)ကြား လတ်တလောတိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ရွှေလီမှာဆွေးနွေးဖို့ KIO နဲ့အစိုးရသဘောတူ
သေနတ်သံတွေမစဲသေးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲတွေကတော့ ဆက်ပြီး ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဒီတိုက်ပွဲတွေရပ်စဲသွားရေး နှစ်ဘက်ကြား ဆွေးနွေးမှုတွေ အချိန်အတန်ကြာ ရပ်ဆိုင်းနေပေမဲ့လို့ မကြာခင်မှာတော့ KIA နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ကြားမှာ ဒီဆွေးနွေး ပွဲတွေ ပြန်စလာဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း KIO ဌာနချုပ်ကို သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို တရုတ်နယ်စပ် ရွှေလီမြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့ရာ မကြာခင် ရက်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ KIO ဘက်က သဘောတူ အကြောင်းကြားခဲ့တာကို ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီကို ဒီကနေ့ ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်လာနိုင်ခြေနဲ့ အဓိကဆွေးနွေးမယ့် ကိစ္စတွေကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုဝင်းမင်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
KIO နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ကြား တနှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ ကြားကနေ အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဟာ KIO ဌာန ချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ကြာသာပတေးနေ့ကနေ မနေ့က အင်္ဂါနေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ KIO အဖွဲ့ရဲ့ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး လုပ်နေချိန် မအားလပ်တဲ့ကြားထဲကပဲ တနင်္လာနေ့မှာ ကြားဖြတ် အစီအစဉ်အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေး သဘောတူခဲ့ တာတွေကို မြန်မာအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အလုပ်ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်းကို ဒီမနက်က ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ လိုင်ဇာကို သွားခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးခွန်အောင်က ဆိုပါတယ်။
“အချုပ်အားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နံပါတ်တစ်အချက်က ဒီ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် သဘောတူ တယ်ပေါ့။ နံပါတ်နှစ် အချက်ကတော့ ရွှေလီမှာလည်း သူတို့က သဘောတူတယ်ပေါ့။ တတိယ အချက်က ရက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့ကတော့ ဒီကြားထဲမှာ သူတို့ အစည်းအဝေး ထိုင်ပြီးတော့မှ စစ်ရှိန် အခြေအနေပေါ့ဗျာ- အဲဒါတွေကို သုံးသပ်ပြီးတော့မှ အဲဒါတွေကို အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဦးအောင်မင်းဆီကို သူတို့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်-တဲ့။”
အဲဒီတော့ အခုလို ဆွေးနွေးဖို့ နေရာကို သဘောတူပြီး မကြာခင်မှာ ရက်ကို ထပ်အကြောင်းကြားမယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အခုချက်ခြင်း ရက်မသတ်မှတ်နိုင်လောက်အောင် KIO ဘက်မှာ ဘယ်လို အခက် အခဲတွေ ရှိနေပါသလဲလို့ မေးရာမှာတော့ ဦးခွန်အောင်က -
“ကျနော်တို့ကျတော့ အဲဒီကိစ္စတော့ မပြောဘူး ခင်ဗျ။ သူတို့က စစ်ရှိန် အခြေအနေကို နည်းနည်း သုံးသပ်ကြည့်အုံးမယ်တဲ့။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ ဗဟိုကော်မတီမှာ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစည်းအဝေးထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲလို့ ယူဆပါတယ်။”
ဒီနေရာမှာ ဘယ်တော့လောက် KIO ဘက်က အကြောင်းပြန်နိုင်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဆွေးနွေး ပွဲတွေ ပြန်စနိုင်ပါသလဲလို့ မေးရာမှာလည်း ဦးခွန်အောင်ကပဲ -
“ခန့်မှန်းတာကတော့ သိပ်တော့ မကြာတော့ဘူးလို့ ပြောတာပဲ။ တရက်နှစ်ရက်အတွင်းတော့ သိရမယ် လို့တော့ ကျနော်တို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒါ့အပြင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက အပစ််အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးမှ ၁၇ နှစ်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ပြန်ဖြစ်လာ ခဲ့တဲ့ KIO နဲ့ အစိုးရတို့ကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ရပ်ဖို့ တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလာခဲ့ပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မရပ်ဘဲ ပိုပြင်းထန်လာတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုနေရာမှာ ပြဿနာတက်နေပါလဲလို့ ဆက်မေးရာမှာတော့ ဦးခွန်အောင်က -
“ဖြစ်စေချင်တဲ့ road map ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကို တင်ပြတယ်။ အဲဒီအခါတော့ ဦးအောင်သောင်းတို့လည်း အဲဒါကို ဖတ်ပြီးတော့မှ အခက်အခဲ တော့ သိပ်မရှိဘူး။ နောက်ဆုံး ဘယ်မှာသွားတစ်နေလဲဆိုတော့ စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့နေရာကျတော့ သူတို့က တာဝန် ယူပြီးတော့ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မျိုး မရှိဘူး၊ အခု နောက်ထပ်လည်းပဲ ဦးအောင်မင်းပြောတာကတော့ - နိုင်ငံရေးကိစ္စကတော့ ကျနော်အားလုံး သဘောတူပါတယ်။ တပ်ကိစ္စကတော့ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့သူ ပါမှပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။”
ဦိးခွန်အောင်ကပဲ ဒီ တစ်နေတဲ့ စစ်ရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က အရေးပါတဲ့ ဒု-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းအနေနဲ့ တရုတ်နယ်စပ်မှာ လုပ်မှာမို့ ဒီတခေါက် မပါလာနိုင်ဘူးလို့ ဦးအောင်မင်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ - ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်ဘက်က အရေးပါသူ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ပါလာရင် အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ KIO ဘက်က အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ပေါ့။ တပ်ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖို့ တကယ်တန်း တာဝန်ပေး လိုက်တဲ့၊ ဆွေးနွေးနိုင်မယ့်၊ တာဝန်ယူနိုင်မယ့်လူပေါ့ဗျာ- တယောက်ယောက်ပေါ့။ အဲလိုတော့ သူတို့ ပြောတယ်။”
မကြာခင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်မှုရှိလာဖို့အတွက် ဘယ်လို အချက်တွေကို သဘောတူဖို့လိုပါလဲလို့ မေးရာမှာတော့ ဦးခွန်အောင်က စစ်ရေးအရ အာမခံချက်ရှိတဲ့ သဘောတူတာမျိုးအပြင် နိုင်ငံရေးအရ အာမခံချက်ရှိတာမျိုးလည်း ပါဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“တခုခုပေါ့ဗျာ၊ အာမခံချက်ရှိတဲ့ ဒီ စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ နှစ်ခုစလုံးနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ဟာ - အဲဒါမျိုး တခုခု သဘောတူထားနိုင်လို့ ရှိရင် ရတယ်ပေါ့။ KIO က နောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကတော့ အဲဒီစကားပါပဲ။”
တကယ်တော့ ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ မနှစ်ကအာဏာရလာအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အရှည်ကြာဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးအပါအဝင် အခြားတိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များစွာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုတွေ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အရင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ KIO ကချင်အဖွဲ့နဲ့တော့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဒေါ်လာ ၃ သန်းတန် အကူအညီ စတင်မည်
စံခလပူရီ (မဇ္စျိမ) ။ ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ NGO အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုဖြစ်သည့် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း (The Nippon Foundation) မှ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား စစ်ဘေးဒဏ်သင့် ဒေသများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သန်းတန် ဆန်နှင့် ဆေးဝါး အကူအညီများကို လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ၏ ပထမသုတ် အနေဖြင့် ပေးအပ်မည်
နောက်ထပ်လည်း ထပ်မံပေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ကွန်ဖရင့်တရပ်
ပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာစဉ် ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်၍ “Conference on Emergency Humanitarian Aid to Myanmar Ethnic Groups” ကွန်ဖရင့်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဂျပန် နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ - NMSP)
“တိုင်းရင်းသားဒေသ အားလုံးအတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်းဖိုးတန် ဆန်နဲ့ဆေးဝါး အကူအညီတွေကို ပထမအသုတ် စပေးသွားပါမယ်။ အဲဒါကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေးမှာပါ။ အဲဒါ အဆင်ပြေရင်တော့ နောက်ထပ် တိုးပြီး
ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
အောက်တို ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်၍ “Conference on Emergency Humanitarian Aid to Myanmar Ethnic Groups” ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၂ ဦး တက်ရောက်ကာ ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင်း အခြေအနေများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုကွန်ဖရင့်၏ နောက်ဆက်တွဲ သဘောတူညီချက်အရ အကူအညီများကို ပြည်တွင်းမှ တဆင့် သော်လည်းကောင်း၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် နည်းလမ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တိုင်းရင်းသားဒေသများသို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင် ပေးအပ်မည်
ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းမှ တဆင့် ပေးပို့မည့် အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စား ပြည်တွင်း NGO တခု ဖြစ်သည့် EGRESS နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ကရင်နီ (ကယား)၊ ကရင်နှင့် မွန် ဒေသများအတွက် အကူအညီများကို ယခုနှစ် မကုန်မီ စတင် ပေးအပ်သွားဖွယ် ရှိသည်။ ကရင်နီ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းများအတွက် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ပရောဂျက် ‘Emergency Relief project of KNPP IDPs’ အရ ရှားတော မြောက်ပိုင်းရှိ ရွာပေါင်း ၁၇ ရွာမှ ပြည်တွင်း အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည် (IDPs) ၄,၄၁၇ ဦးတို့ အတွက် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၅ဝ၄, ၉ဝဝ တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးနှင့်ဆန် များကို အောက်တို ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းတွင် ပေးအပ်ဖွယ် ရှိသည်။
အလားတူ ကရင် ဒေသအတွက် KNU ၏ တပ်မဟာ (၁) မှ (၇) အထိနှင့် ဌာနချုပ် စခန်း တခုချင်းစီတို့အား တလလျှင် ဆန်အိတ် ၄ဝဝ ခန့် ပေးအပ်ရန်လည်း ရှိသည်။ ထို့ပြင် DKBA ကလို့ထူးဘော ကရင်အဖွဲ့အစည်း (KKO) နှင့် ဗိုလ်ထိန်မောင် ဦးစီးသည့် KNLA Peace Council သို့လည်း တလလျှင် ဆန်အိတ် ၄ဝဝ ပေးအပ်ရန် ရှိသည်။ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ (NMSP) သို့လည်း မော်လမြိုင်မီတဆင့် တလလျှင် ဆန်အိတ် ၁,ဝဝဝ ပေးအပ် ကူညီရန် ရှိသည်။
ကျန်တိုင်းရင်းသား ဒေသများ ဖြစ်သည့် ကချင်၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ပလောင်၊ ရှမ်း တို့ အတွက်လည်း အလားတူ အကူအညီ ပေးအပ်သွားရန် ရှိပြီး အသေးစိတ် အစီအစဉ် များကိုမူ မသိရသေးပေ။
“Conference on Emergency Humanitarian Aid to Myanmar Ethnic Groups” အတွင်း နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ Yōhei Sasakawa နှင့် UNFC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ တို့အား အတူတကွ တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - NMSP)
“အကူအညီ ပေးဖို့အပေါ်မှာလည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကျနော်တို့ UNFC နဲ့ နားလည်မှု စာချွှန်လွှာတွေ လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးကြပါပြီ။ သူတို့က ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံရေး အဖြေ ရှာကြဖို့မှာ ဖိအားပေး ကူညီသွားဖို့ ရှိတယ်” ဟု ဂျပန် ခရီးစဉ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်သူ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ နိုင်ဟံသာ (ဗိုန်ခိုင်) က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် UNFC တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရှိသည်ကိုလည်း နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကမကထ လုပ်၍ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကမ္ဘောဒီးယား
နိုင်ငံ၌ တကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ၌ တကြိမ် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
“ကျနော်တို့ မူ ၆ ချက်ရယ်၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မူ ၈ ချက်ရယ်၊ အဲဒါကြီးကို ညှိရမှာပါ။ အဲဒါကြီးက ချက်ခြင်း စားပွဲပေါ်ကို ရောက်လာဖို့တော့ ခက်တယ်။ အခင်းအကျင်းလေးတွေ အရင် သွားရမယ်။ အဲဒီကိစ္စ ကျနော်တို့ အချင်းချင်းလည်း ညှိနှိုင်းရဦးမှာပါ” ဟု UNFC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအဖြစ် တည်ရှိပေးရန် နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း အား UNFC မှ တောင်းဆိုထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေသည့် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက် နေမူများကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ရန်အတွက် ပြည်ပအခြေ စိုက် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့က စုပေါင်း ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ကာ တောင်းဆို လိုက်သည်။
ကြေငြာချက်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားကောင်းစီ (အိန္ဒိယ-ANC)မှ ဥက္ကဌ ဆရာတော် အရိယာ ၀ံသက ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ရသည့် အကြောင်းကို ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာကို ရပ်တန့်ပြီး အခုအခြေအနေကနေ နည်းနည်း ပိုမို ကောင်းမွန် လာအောင် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ထုတ်တာပါ။ မိမိတို့ဘက်က အမှန်ရှိနေတာကနေ နိုင်ငံတကာမှာ ရခိုင်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ၀ါဒဖြန့်ပြီး အမြတ် မထုတ်ရအောင်နဲ့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နဲ့ လုပ်ကြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်” ဟုဆိုသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် ပြည်ပ အခြေစိုက် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့ ပါရှိပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့များမှာ (၁) ရခိုင်ပြည်အမျိုး သားကောင်စီ (ANC-India)၊ (၂) ရခိုင်အသိုင်းအဝိုင်း (ဥရောပ)-Arakan Community (Europe)၊ (၃) ရခိုင်ပြည် အမျိုးသားကောင်စီ ထောက်ပံ့ရေးအသင်း (မလေးရှားနိုင်ငံ) –Association of ANC Supporting (Malaysia) (၄) ရခိုင်ပြည် အမျိုးသားကောင်စီ ထောက်ပံ့ရေး အသင်း (အမေရိကန်) –Association of ANC Supporting (The United States of America)၊ (၅) ရခိုင် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ (Arakan Worker Union-Thailand)၊ (၆) ရခိုင် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Arakan Trade Union-India)၊ (၇) ရခိုင်ပြည်လွပ်လတ်ရေး အင်အားစု(Arakan Independent Force-Banglad esh)၊ (၈) ခမီး တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီ (Khami Development Party-Bangladesh)၊ (၉) ရခိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့(Organization of Arakan Develo pment-Bengladesh)၊ (၁၀) ထရီပူရ ရခိုင်စာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေးအသင်း (BHIC-India)၊ (၁၁) ရခိုင်အမျိုးသားညီညွတ် ရေးပါတီ (NUPA-Bengladesh)၊ (၁၂) ရခိုင်ပြည်ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ (DPA-India-Burma Borders) တို့ ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က မင်းပြားမြို့ ပိုက်သည်ရပ်မှ စတင်ခဲ့သည့် ဆူပူမှုမှာ အခုခါ မြောက် ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရသေ့တောင်နှင့် မြောက်ဦးမြို့များသို့ ကူးစက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆူပူမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အနာဂတ်မှာလည်း စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် အရိယာဝံသက ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
“ ဆက်ပြီးဖြစ်နေရင် ရခိုင်ပြည်အနေအထားက ပိုပြီး ဆိုးသွားမယ်။ အခုတောင်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ဟာ ပြာပုံ ဘဝကို ရောက်နေပြီလို့ ပြောနေကြတယ်။”
ယခု လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ပဋိပက္ခကြောင့် ရခိုင်ဘက်မှ လူပေါင်း ၅၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိထားပြီး တစ်ဒါဇင်ကျော်ခန့် သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြေငြာချက်တွင် နှစ်ဖက်စလုံး အနေဖြင့် ပြဿနာ ဆက်မဖြစ်ပွားရအောင် ပြန်လည် ထိမ်းသိမ်း ကြရန်နှင့် နောင်ကို ဘင်္ဂလီ မူဆလင်တွေရော ရခိုင်အမျိုးသားများပါ အကြမ်းဖက်မှုများ လုံးဝ မပြု လုပ်ကြရန်နှင့် အာဏာပိုင်အစိုးရများအနေဖြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ဒေသအတွင်း တည်ငြိမ်ရေး၊ အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံစေရေးစသည့် အစိုးရတရပ်၏ လုပ် ဆောင်ရမည့်တာဝန်ကို အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ကြရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ရခိုင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးမှ ကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီး ရခိုပြည် နယ် တွင် ဖြစ်ပွား နေသည့်ပြဿနာများကို နှစ်ဘက်လုံးမှ ရပ်တန့်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထားသည်။
အလားတူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့မှလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခများ အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ကြရန် ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-S) က မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာမီရက်ပိုင်း အတွင်း အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားသည်။
နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံမည့် နေ့ရက်ကို အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း မရှိသော်လည်း ယခု တပတ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ် မြို့နယ်တွင် တွေ့ဆုံကြမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း SSA တောင်ပိုင်း ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် စိုင်းဆိုင်မိဏ်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
SSA တောင်ပိုင်း အနေနှင့် ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ဒုတိယ အကြိမ် အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံ၍ သဘောတူညီမှု ရထားသော မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ကိစ္စရပ်ကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“အရင်က ကျနော်တို့ သဘောတူညီချက်တော့ ရထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ ဘာမှ လုပ်ဆောင်ရတာ မရှိသေးပါဘူး၊ အခု ပြန်ပြီးတော့ ထပ်မံ ဆွေးနွေးမှာပါ”ဟု စိုင်းဆိုင်မိဏ်းက ဆက်ပြောသည်။
SSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ပူးပေါင်း၍ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်အရ ဘိန်း အစားထိုး သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသိပညာပေးရေး အစီအစဉ်တို့ ပါ၀င်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တိုက်ဖျက်ရေးရုံး (UNODC) အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် တချို့ တက်ရောက်မည်ဟုလည်း စိုင်းဆိုင်မိဏ်းက ပြောသည်။
SSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့မှ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီဝင်များကို ဗိုလ်မှူးချုပ် ပေါင်ခေးက ဦးဆောင်၍ အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေ ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်မည်ဟု သိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးခွန်စိုင်းက“ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မြို့နယ်တိုင်းလိုလို ဘိန်း စိုက်ပျိုးနေကြတယ်။ အားလုံး ၅၅ မြို့နယ် ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဘိန်းမစိုက်ပျိုးတဲ့ မြို့နယ်ဆိုတာ ၆ မြို့နယ်ပဲရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်း မရှိသည့် မြို့နယ်များမှာ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ထိန်းချုပ်ဒေသတွင် ၄ မြို့နယ် အပါအဝင် မိုင်းလာနှင့် ကိုးကန့်ဒေသတို့ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဦးခွန်စိုင်း၏ အဆိုအရ SSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပါက ဘိန်းအစားထိုး သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများအတွက် ဆေးဖြတ် စခန်းများနှင့် ပညာပေးရေး အစီအစဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မလွယ်ကူသေးကြောင်း ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန် ပြီးလျှင် မူးယစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယ အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေကြောင်း၊ တကမ္ဘာလုံး၌ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၇ သန်းခန့်ရှိပြီး တနှစ်လျှင် သုံးစွဲသူ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး သေဆုံးမှု ရှိကြောင်း၊ ဘိန်းဖြူနှင့် ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြောင့် တနှစ်လျှင် လူ ၂ သိန်း ၀န်းကျင် သေဆုံးမှုရှိကြောင်း UNODC ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
“မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်း အပြင် ထပ်ပြီးဆွေးနွေးရမှာက အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အစိုးရနဲ့ ကျနော်တို့ ကြားမှာလည်း နားလည်မှု ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ အချက်ဟာ အဓိက ဆွေးနွေးရမယ့် အထဲမှာ ပါ၀င်နေတယ်” ဟု SSA တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့မှ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က ပြောကြောင်း သျှမ်း သံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။
မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့တွင် SSA တောင်ပိုင်းမှ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီအဖွဲ့နှင့် နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
ယင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရဘက်မှ ဒု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းက တရားဝင် တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူညီချက် ၁၂ ချက် ရရှိထားပြီး အစိုးရဘက်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ ဦးအောင်မင်း၊ SSA တောင်ပိုင်းဘက်မှ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် ပေါင်ခေးတို့က သဘောတူ လက်မှတ် ထိုးခဲ့ကြသည်။
သဘောတူညီချက် ၁၂ ချက်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ပူးတွဲနှိမ်နင်းရေး၊ SSA တောင်ပိုင်း အဖွဲ့အား မတရားအသင်း အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးရေး၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ပြုလုပ်ပေးရေး၊ SSA တောင်ပိုင်း အဖွဲ့နှင့် မိသားစုဝင်များ နေရာချထားရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ရေး စသည့်အချက်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
NLD နဲ့ ၈၈ တို့က အကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ရေး တောင်းဆို
လတ်တလော ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြား ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ရေး နဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အမြန်ဆုံး ရရှိရေးအတွက် NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့တို့က ဒီကနေ့ ကြေညာချက်တွေ အသီးသီး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ၊ မင်းပြား၊ မြောက်ဦးနဲ့ အမ်းမြို့တွေမှာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ကြောင့် သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူတွေ အများအပြား ရှိနေတာကို ဝမ်းနည်းဖွယ် ကြားသိရကြောင်း၊ အစိုးရနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ အခုထက် ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ကြဖို့ NLD က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့- ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းသွားရေးအတွက် ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကူညီ ထိန်းသိမ်းပေးကြဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ မဟုတ်သလို နောက် ကြံုတွေ့လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာ အရပ်ရပ်ကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားသူများကို အရေးယူမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးကလည်း ဒီကနေ့ အသိပေး ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အကြမ်းဖက်မှုတွေ တိုးလာတဲ့အပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း အထူး စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်စုံကို မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်စုံ ပြောပြပေးထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခုတကြိမ် ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အတွင်း သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူ ၆၀ လောက် ရှိသွားပြီးလို့ သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
“ဆိုးဆိုးရွားရွားကတော့ သေတာတွေ ပျောက်တာတွေ ရှိတယ်။ သေတာရော၊ ဒဏ်ရာ ရတာရော ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရတဲ့သတင်းအရတော့ ၆၀ လောက် ရှိမယ်။ ၆၀ ၀န်းကျင်လောက်ပေါ့။ အိမ်တွေဘာတွေရော ပျက်တာ တော်တော်များများတယ်။ သာသနာရေး၊ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေ ပျက်စီးတာတွေလည်း ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ညမထွက်ရ အမိန့် ချမှတ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တယ်။ ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ အခု သမ္မတကြီးက ဟိုနေ့ကပဲ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အားကို တိုးမြင့်ပေးဖို့ သူ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်တယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ည ၈ နာရီ ထုတ်တဲ့ဟာကတော့ နောက်ထပ် တခုပေါ့။”
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ၊ မင်းပြား၊ မြေပုံနဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာ ဒီရက်ပိုင်း ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေတာမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးသူ ၁၂ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၅၀ နဲ့ လူနေအိမ်ခြေ ၁၉၄၈ လုံးနဲ့ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးပေါင်း ၈ ခု မီးလောင်ခဲ့ပြီး လူတွေအများအပြား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သမ္မတ ရုံးကလည်း ဒီကနေ့ပဲ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ခုလိုမျိုး ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုတွေက နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အကြောင်းနဲ့ အခု ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေပြီး ဒီလူတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူသွားမယ်လို့လည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခုလို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေ အရ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂကလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ထိခိုက် ခံစားရတဲ့သူတွေကို လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ အကူအညီတွေ ပေးသွားနိုင်ဖို့အတွက် ချွင်းချက်မထားဘဲ ချက်ချင်း အကူအညီတွေ သွားရောက်ပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ က တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူပေါင်း ရ သောင်း ၅ ထောင်လောက်ကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူသားချင်း စာနာကူညီကြတဲ့ အဖွဲ့တွေက မြန်မာအစိုးရနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပြီး အကူအညီတွေ ပေးနေတယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ သမ္မတရုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးတဲ့ အရေအတွက်ဟာ ၁၂ ဦး ရှိသွားပြီလို့ ဆိုပေမဲ့ အစိုးရ အရာရှိတဦးကို ကိုးကားပြီး အေပီသတင်းရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ အခုနောက်ဆုံး အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် သေဆုံးသူဟာ ၅၆ ဦး ရှိသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။